ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ရှုံးနိမ့်သူအတွက်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့သည်?
အားဖြင့် Angelettie Add
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဖေဖော်ဝါရီ. 27 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
တစ်ဦးကပ်ရောဂါဒီနေ့ရဲ့လျင်မြန်သောအရှိန်အဟုန်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှာရှိပါတယ်အပေါ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ် — ငါတို့ရှိသမျှသည်အလွန်အရေးကြီးဘဝတွေကိုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကတခြားပျောက်ဆုံးနေခြင်းနှင့် Romantic တက်ချိတ်ဖို့အရမ်းနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြ၏. ကျွန်တော်တို့တုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချွတ်ယောက်ျားတွေရိုက်နှက်ခဲ့သည့်အခါကျောင်းမှအထက်တန်းကျောင်းသားများအားရိုးရှင်းသောရက်အဘယ်အရာဖြစ်ခဲ့:)?
ကောင်းစွာ, အဖြစ်မှန်တစ်ချိန်ချိန်သူတို့အားယောက်ျားတွေအတော်များများလက်ထပ်သည်, အခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသို့ပြောင်းရွှေ့, ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့မိန်းမလျာခဲ့ကြသည်သဘောပေါက် — မစ္စတာဒါရှာဖွေရေး. ညာဘက်အစဉ်အဆက်ထက် ပို. ခက်ခဲသည်. အရည်အချင်းပြည့်မီဘွဲ့ရေကန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြဲ ticking အချိန်ဗုံးထက်ပါးလွှာမြန်ဆန်လာပြီဖြစ်ပါတယ်.
ဤအချက်များကိုမျက်နှာကို၌သင်တို့ကိုစိုက်ကြည့်နှင့်အတူ – သင်သည်အစဉ်အဆက်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ကြိုးစားနေထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြ? ဒါဟာသိသိသာသာတစ်ဦး mouse ကိုအနည်းငယ်လေးမျှနှိပ်ရုံနဲ့ချိန်းတွေ့ရေကန်၏အရွယ်အစားကိုတိုးမြှင့်ဖို့လွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်.
ယခုငါသည်သင်တို့ကိုစဉ်းစားနေကြတယ်ဆိုတာသိ. အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အော်သံအလွန်ဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေမျိုး. ပြီးခဲ့သည့်အပန်းဖြေစခန်း. Loserville! ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမစဉ်းစားကြဘူး. အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့တစ်ခုရှည်လျားသောလမ်းလာပြီဖြစ်သည်အဘယ်ကြောင့်ထိုအကြောင်းပြချက်.
ဒါဟာသားကောင်မှသတိမရှိသောအမျိုးသမီးကိုရှာမရှိတော့မုသာဝါဒီများနှင့်အိမ်ထောင်သည်အမျိုးသားတွေတစည်းကိုအဘို့ဤလျှို့ဝှက်အွန်လိုင်းဖိုရမ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်. မလုပ်ပါနှင့် – ယခုပုံမှန်အစည်းအဝေး, အလုပ်လုပ်ကိုင်, စိတ်ပျက်ဆိုရင် single အွန်လိုင်းမေတ္တာဘို့ရှာဖွေခြင်းနှင့်အောင်မြင်မှုကိုရှာဖွေနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်. အားလုံးအသက်အရွယ်အုပ်စုများ. အားလုံးနွယ်နွယ်. ဘာသာတရားအားလုံးဟာ. လူတိုင်းအတွက်သည့်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့န်ဆောင်မှုရှိပါတယ်! ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်စမ်​​းသုံးကြည့်မပေးရန်မယ့်အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်.
1. သင်တွေ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်အွန်လိုင်းနှင့်သဟဇာတဖြစ်ကြတစ်စုံတစ်ဦးကိုသင်သေးရာတို့ကိုသိရဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး. သတိနှင့်ဘုံသဘောနှင့်အတူမည်သည့်လူအပေါင်းတို့နှင့်အသစ်အွန်လိုင်းဆက်ဆံရေးကိုဆက်ဆံပါ.
2. ပွင့်လင်းစိတ်ဖြင့်ဒီကြိုးစားကိုယ့်ကိုကိုယ်ခွင့်ပြု. သင်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းတစ်လုံးတစ်ခဲတည်းခံစားမယ်ဆိုရင်, သင်တို့သည်လူကိုတွေ့ဆုံကြသောအခါကဖြတ်ပြီးလာကြလိမ့်မည်. သင့်ရဲ့စိတ်ကိုညာဘက်ရယူပါ:)
3. သင်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုနီးစပ်ဖြစ်ကြပြီးသင့်အွန်လိုင်းအော့ဖ်လိုင်းအတွေ့အကြုံယူအထူးသဖြင့်ဆိုရင်တစ်ယောက်ယောက်ကိုပြောပြပါ. သင်ထိုသို့ခြောက်လှန့်မခံပါနဲ့ – ဒါပေမယ့်မည်သည့်ရက်စွဲနှင့်တူ – သတိကြီးစွာဖြစ်.
4. သင်မစ္စတာတွေ့ဆုံကြသည့်အခါ. မှန်သော – get အော့ဖ်လိုင်း! လုံလောက်မလုံလောက်သောအခါကို သိ. နှင့်သင်၏ဦးခေါင်းကျော်ရောက်ရှိမကိုယ့်ကိုယ်ကိုပျက်ပြားမပြုပါနဲ့.